Ziziphi iifowuni kunye nantoni ebangela ukuvuvukala kwabo?
Iifowuni zezilwanyana zibandakanya ama-ovari kunye nezigulane ze-fallopian. Kwimeko enempilo yazo zonke izitho zangasese, indawo apho izithako ezitholakala khona zingenakunyumba. Ukuchithwa kwezi zimo ezinyumba kubangela izifo.
Isizathu esibalulekileyo sisifo sobungozi bangaphakathi kwintombi ngokuqhagamshelana ngesondo. Ukuqhaqhazeka okungapheliyo kwezi-appendages kubangela ukusulelwa (i-trichomoniasis, i-chlamydia, i-mycoplasmas): eli lifanelekileyo ngokufanelekileyo la ma microorganism yi-tublopian tubes. Kodwa i-chlamydia ingabamba kuphela ngexesha lokwabelana ngesondo. Umama ogulayo kunye ne-chlamydia, ngexesha lokusana, unokuphazamisa intombi yakhe. Indlela ekhoyo yentsapho yokusuleleka ngu-chlamydia: ezi ncinci zihlala kwiintsuku ezimbini. Umzimba awukwazi ukujamelana nale ntsholongwane ngokwalo, ngoko ke, unyango olufanelekileyo olumiselwe ngugqirha luyimfuneko.
Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqho kubangela ukuba kuvele ukuvutha kwamacandelo e-appendages: kunceda ukwandisa umsebenzi we-microbes ngokwemimiselo yamanqindi onke (E. coli, streptococcus nabanye). Ukuba umzimba uphilile, ngoko unako ukulwa nezimo ezincinane ze-pathogenic microorganms. Xa i-hypothermia, amandla okukhusela umzimba uyawa, loo ntokazi inokutshabalala kwamacandelo.
Ukongezelela kwezi zizathu, izinto ezinokubangela ukuba zixinzeleleke kwaye zenzeke ngokweqile, izifo zangaphakathi, iziphumo zokukhipha isisu.
Impawu eziphambili zesifo
Ngokuqhelekileyo akukho zibonakaliso ezibonakalayo zesifo, okanye zinobubele, ngoko ke umfazi akaxhalabisi. Ukuvuvukala kwama-ovari kunye nama-fallopian tubes yi-salpingoophoritis (ngaphandle kwe-adnexitis). I-ovary eyodwa kuphela, okanye ityhubhu enye, kunye neesibini kunye nama-ovari kunye nezibini zombini zinokutsha. Xa ugula ixesha elide, eliye ladlulela kwifomu engapheliyo, kukho utshintsho kumsebenzi wee-appendages. Xa uqala ukuvuvukala, unokuvela kwixesha elisezantsi kwesisu, okanye kwimeko yesifo se-lumbar, umjikelezo wokuya esikhathini uyaqhekeka, ukukhupha, ukuvumba kunye nokuvumba okungahambi kakuhle.
I-Adnexitis iyakwenzeka ngokunyuka ngokukhawuleza kweqondo lokushisa, intlungu kwisisu esezantsi, ukubhubhisa, ukuvuvukala kwe-peritoneum. Ukuzinyango kukukhokelela kwifomu engapheliyo nemiphumo emibi, ukuya kwisiphumo esibulalayo. Iimpawu ze-adnexitis zingabikho ntsholongwane.
Imiphumo eyenzekayo yokuvuvukala kwezi zixhobo
Ngenxa yokuvuvukala kwezi zixhobo, kunokubakho iingxaki kwisigaba sokukhulelwa komntwana, ngexesha lokubeleka kunye nokubeleka. Ukuba ibhinqa lingazange liphathwe ngexesha elifanelekileyo, ukuvuvukala kwamacandelwana kungaqhubeka kwifomu engapheliyo, kwaye kunye nokunyanzelana, ukungabikho kwengqondo kungenzeka.
Iingxaki zokuvuvukala kwezi zixhobo zingabonakaliswa kokubambisana. Ngokukhula koxinzelelo, isakhiwo se-tublopian tubes kunye nama-ovari ashintsho. Ukunyuka kwamanyathelo okubambelela kunokukhokelela ekugqibeleni iipayipi ezipheleleyo.
Ngamanye amaxesha ukuvuvukala kwamacandelwana kunokukhokelela ekuqaleni kwe-peritonitis, kunye nemiphumo yayo ingaba nzima: i-peritoneum inokutshisa.
Esinye isiphumo esinzima senkqubo yokukhulelwa ingaba nokukhulelwa kwe-ectopic: ngenxa yokukhutshwa kwamatope, okanye imisebenzi engaphumeleli yeendonga zangaphakathi zamatye, iqanda elichumayo alingenanga kwisibeleko, kodwa isisu esiswini sisekho, okanye kwi-tube fallopian, apho kungekho zimo zokuphuhliswa kwayo.
Amaqanda asebenza ukuvuthisa iqanda, leyo leyo, ephuma kwiibhulo ezikhohlakeleyo, ingena kwisibeletho. Ukuba i-ovum ixiliswe (ukuchumisa kwenzeka kwi-tube fallopian), ngoko kungena kwisisu, kufuneka silungise udonga lwayo kwaye siqale ukuphuhlisa iinyanga ezilisithoba.
Ukuba akukho ukuvuvukala kwezitho zangaphakathi kunye ne-microflora lichanekile, ke iqanda lichanekile kwindawo elungileyo eludongeni lwesisu kwaye ngokufanelekileyo lukhula. Xa ukhulelwe kunye nokugqabhuka okungapheliyo kwezixhobo, kufaka ingozi yokuba iqanda lingenakukwazi ukufumana udonga lwesisu (umfazi akakhulelwa) okanye akayi kuhlala (ukukhulelwa kwesisu nakweyiphi na isantya). Kodwa kukho umngcipheko nokufa komfazi ngexesha lokubeleka: ukuba iqanda elichumayo lijonge ngaphantsi, i-placenta iyakubhalela ngokuthe ngqo okanye inxalenye yendlela yokuzalwa, kwaye oku kuphakame kakhulu kokufa komfazi ngenxa yokulahleka kwegazi, okukuthi, ngokusemthethweni, akunakunqanda ngexesha lokubeletha.
Xa kungekho zicwangciso zokuvuvukala kwaye i-microflora ayiqhekekanga, umfazi unako ukukhulelwa umntwana, ukuzala nokuzala ixesha elifanelekileyo. Wonke umfazi kufuneka aqonde ukuba ukukhulelwa nokukhupha okungapheliyo kwezixhobo ezihlanganisiweyo akudibaniswanga.
Kubalulekile ukukhusela izifo emzimbeni, ingakumbi i-angina engapheliyo: imvelaphi ye-hormonal ishintshile, isistim somzimba siphelele (inkqubo yokuzihlambulula ubulili iphazamisekile), ukuvuvukala kweefowunithi kwenzeka.
Ucoceko lomntu kubalulekile. Ukutshintsha kwansuku zangaphantsi kwengubo zangaphantsi, kabini ngemini yokuhlamba. Ngexesha lokuya esikhathini, tshintsha iipilati nganye iiyure ezimbini, isitya sokuhlamba emine kane ngosuku, kungabandakanyi ukuhlamba, isitya okanye i-pool. Ngaphandle kokubonisana nogqirha, musa ukwenza ii-douches ukukhusela umonakalo kwi-microflora yokukhusela.
Ukukhokela impilo ephilileyo. Ukuyeka ukutshaya notywala, ukuseka ukutya okufanelekileyo. Ukubandakanya kwimifuno yokutya kunye neziqhamo, ukuba ungabandakanyi yonke into ebukhali, ukukhawulela amnandi, usawoti, unomthi. Imithwalo yemvelo eqondakalayo iboniswa, kungcono, ukuba ubunzima bokuzivocavoca ngokuqhelekileyo kunconywa ngugqirha.
Musa ukuvumela i-hypothermia. Njalo ugqoke kwaye ugqoke ixesha lexesha. Ngokukodwa musa ukuvumela i-hypothermia yemilenze kunye neentambo. Musa ukuhlala kumhlaba onomdaka, okanye ilitye. Ehlobo, emva kokuhlamba, kufuneka usule ngokukhawuleza ngomela kunye nokutshintsha kwiingubo ezomileyo.
Into ephambili - kufuneka uhlaziye rhoqo imeko yomzimba wakho kwaye ukwazi ukuqonda iimpawu zokuqala, ukuze xa uhamba ugqirha uze ufumane unyango opheleleyo.
Umfazi kuphela othe tye malunga nempilo yakhe ukususela kumncinane unokukhulelwa aze abelethe umntwana onempilo.
Isifo sikashukela sikhuphe ngexesha lokukhulelwa
I-Hepatitis B ngexesha lokukhulelwa
Iingxaki ngexesha lokuthwala umntwana
Ioli ye-Heparin ngexesha lokukhulelwa
Iikhalenda zezinwele zeLunar ze-Oktobha 2017 - iintsuku ezikhethiweyo zokunyamekela iinwele kunye nezipikili
Ukutya ekuntwaneni kokutya
Iholide elifanelekileyo kubantu abadala
Indlela yokuziphatha nomntu: amaqhinga amabhinqa
Ukutya ngesithakazelo se-anemia
Iiwele zeHoroscope, unyaka wonke
Ihagu yengulube nge-orange-sauce
I-ring pie kunye neepoppy imbewu kunye neziqhamo
Iipropati ezisetyenziswayo zeparsley